Nweta Technology | Martech Zone
Azụ ahịa na teknụzụ azụmaahịa na-apụta na-atụle maka Martech Zone, gụnyere ọgụgụ isi, bots, nhazi asụsụ nkịtị, mmụta igwe, eziokwu mebere, wdg.
Nyaahụ, mụ na ndị isi ụlọ ọrụ mpaghara nọ, anyị na-atụlekwa ụfọdụ mpụga. Offọdụ usoro a chọrọ ga-achọ ụfọdụ ndekọ ndekọ ka emelitere, yabụ ajụrụ m onye nwere ike ịbanye na ụlọ ọrụ DNS. Enwere ụfọdụ oghere, n'ihi ya, emere m ngwa ngwa Whois na GoDaddy iji chọpụta ebe e debara aha ngalaba ahụ na ndị edepụtara aha ha. Mgbe m hụrụ nsonaazụ ya,